सकारात्मक रहनुहोस् - Easy सजिलो तरीका तपाईको दिमाग व्यायाम गर्नुहोस् - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | फरवरी 14, 2020 | सकारात्मक सोच, व्यक्तिगत विकास, आत्म-सुधार |0|
1 तपाईंको मानसिक मांसपेशीहरू फ्लेक्स गर्नुहोस् र तपाईंको दिमाग व्यायाम गर्नुहोस्
1.1 Best उत्तम मस्तिष्क अभ्यास तपाईलाई सकरात्मक रहन मद्दत गर्न
1.2 यहाँ तपाईको दिमागका लागि सब भन्दा राम्रो मेमोनिक अभ्यासहरू छन्:
1.2.1 तपाईको मस्तिष्क स्वास्थ्यका लागि उत्तम भिटामिन र पोषक तत्व
यो सामान्य ज्ञान हो कि तपाईको शरीरलाई स्वस्थ राख्न तपाईको शरीरलाई व्यायाम गर्नुपर्दछ। त्यस्तै प्रकारले, यदि तपाईं मानसिक रूपमा फिट राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो मस्तिष्क अभ्यास गर्नुपर्छ।
अनुसार हार्वर्ड मेडिकल स्कूल “वैज्ञानिकहरूले सोचेका थिए कि मस्तिष्क जडानहरू जीवनको पहिलो केही वर्षहरूमा द्रुत गतिमा विकसित हुन्छन्, जब सम्म तपाईं आफ्नो २० औं दशकमा आफ्नो मानसिक शिखरमा पुग्नुभएन।
तपाईको संज्ञानात्मक क्षमताहरु मध्यम उमेर वरिपरि बन्द हुनेछ, र त्यसपछि बिस्तारै गिरावट गर्न थाल्छ। हामीलाई थाहा छ यो सत्य होईन। यसको सट्टा, वैज्ञानिकहरूले अब दिमाग निरन्तर परिवर्तन भइरहेको र सम्पूर्ण जीवन कालमा विकासको रूपमा देख्छन्।
जीवनमा त्यहाँ कुनै अवधि हुँदैन जब दिमाग र यसको कार्यहरू स्थिर स्थिर हुन्छ। केही संज्ञानात्मक कार्यहरू उमेरसँगै कमजोर हुन्छन्, जबकि अरूहरू वास्तवमा सुधार हुन्छन्। ”
तथ्य यो हो कि हाम्रो दिमागका केही क्षेत्रहरू आकारमा संकुचित हुन्छन्।
यदि तपाइँ सकारात्मक सोचमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने सकारात्मक रहनको एक उत्तम तरिका तपाइँको दिमागको व्यायाम हो।
तपाईंको मानसिक मांसपेशीहरू फ्लेक्स गर्नुहोस् र तपाईंको दिमाग व्यायाम गर्नुहोस्
तपाइँलाई थाहा छ तपाइँ तपाइँको मांसपेशीहरु लाई तपाइँको शरीर को फिटनेस मा एक फरक बनाउन को लागी फ्लेक्स गर्न सक्नुहुन्छ, तर के तपाइँ तपाइँ आफ्नो मानसिक मांसपेशिहरु को व्यायाम र एक राम्रो स्मृति र अधिक मस्तिष्क शक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर थाहा छ?
जब तपाईं आफ्नो मानसिक मांसपेशीहरू फ्लेक्स गर्नुहुन्छ दिमागले दिमागमा न्यूरो पथहरू सिर्जना गर्दछ। केहि व्यायाम र गतिविधिहरूले दिमागलाई प्रभावकारी रूपमा पाँच मुख्य संज्ञानात्मक क्षेत्र कार्यहरू गर्न सक्छन्।
यदि तपाइँ दैनिक व्यायाममा यी अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाइँ फिट र सक्रिय हुनको लागि तपाइँको दिमागलाई तालिम दिन सक्नुहुन्छ र तपाइँको मेमोरी रिकल बढ्नेछ।
मस्तिष्कले संज्ञानात्मक मान्यताका निम्न क्षेत्रहरू समावेश गर्दछ:
हाम्रो दिमागको यो अंश सम्झन, बुझ्ने र शब्दहरू पहिचान गर्न सक्षम हुनुमा समर्पित छ। तपाईको मस्तिष्कको यो क्षेत्रलाई नयाँ भाषाहरूको अभ्यास गरेर, तपाईको व्याकरण कौशल र तपाईको शब्दावली बढाएर चुनौती दिन सक्नुहुन्छ।
२ ध्यान स्प्यान
कुनै चीजमा ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो छ यदि तपाईं बहु-टास्क हुनुहुन्छ। आवाज र अन्य ध्यान भ .्ग गर्न पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न आफ्नो क्षमता रोक्न सक्छ।
तपाईं आफ्नो ध्यान मस्तिष्कको भागमा मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको काम गर्ने तरिका परिवर्तन गरेर। कामको लागि तपाईंको मार्ग परिवर्तन गर्ने वा कुनै पनि प्रकारको तालिकाले तपाईंको मस्तिष्कलाई जगाउन सक्छ र आवश्यक पर्दा ध्यान दिन यो मद्दत गर्दछ।
हामी उमेर बढ्दै जाँदा, तपाईंको मस्तिष्कको मेमोरी क्षेत्र बिगार्न सक्छ। कहिलेकाँही त्यो पागलपन वा अल्जाइमरको कारणले हो, तर प्राय जसो हामी केवल हाम्रो संज्ञानात्मक गतिविधिहरू बढाउनु पर्छ। त्यो मानसिक गणना, तर्क शक्ति र याद गर्न को लागी समावेश छ।
तपाइँ खेलहरू जस्तै क्रसवर्ड पजलहरू खेल्नुहुन्छ तपाइँको मस्तिष्कमा एक रसायनलाई "Acetylcholine" भनिन्छ जुन तपाइँको मस्तिष्क मेमोरी सीपलाई बढावा दिन्छ।
Executive. कार्यकारी समारोह
कार्यकारी कार्यको रूपमा चिनिने तपाईंको मस्तिष्कको भागले तपाईंको तर्क र तर्क शक्तिहरूको मद्दत गर्ने कार्य गर्दछ।
कार्यकारी कार्यले तपाईंलाई लक्ष्यहरू र तपाईंको जीवनमा अन्य प्रमुख निर्णयहरूमा पुग्न रणनीतिहरू विकास गर्न मद्दत गर्दछ। भिडियो खेलहरू तपाईंको मस्तिष्कको यस क्षेत्रको लागि ठूलो उत्तेजना हो र सामाजिक अन्तरक्रियाले पनि मद्दत गर्न सक्छ।
Vis. दृश्य स्थानिक कौशल
हामी त्रि-आयामिक संसारमा बाँचिरहेका छौं, र color र दृश्यहरूले भरिएका, हामी हाम्रो विश्लेषण गर्न सक्षम हुनुपर्दछ हाम्रो विभिन्न वातावरण बिना कार्य गर्न।
तपाईको आँखाको अगाडि र तपाईको परिधीय दर्शन भित्र तपाईले के देख्नुहुन्छ त्यसलाई अवलोकन गर्दै दृश्य-स्थानिक कौशल विकास गरिन्छ। यी सीपहरू विकास गर्न, एक तस्वीर हेर्नुहोस्, यसलाई उल्टाउनुहोस् र त्यसपछि तपाईंले चित्रमा देख्नुहुने हरेक वस्तु लेख्नुहोस्। तपाईंको वरिपरिको कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्न यो एक राम्रो व्यायाम हो।
जसरी तपाईले तपाईको शरीरको सम्पूर्ण मांसपेशिहरु लाई समग्र स्वस्थता प्राप्त गर्न व्यायाम गर्नुहुन्छ - जसरी तपाईको उमेर अनुसार तपाई मानसिक रुपमा तीखो र सक्रिय रहन दिमागको यी पाँच क्षेत्रहरु उत्तेजित गर्नु पर्छ।
मानसिक उमेर परीक्षण लिनुहोस् तपाईको दिमागको उमेर के हो भनेर पत्ता लगाउन।
Best उत्तम मस्तिष्क अभ्यास तपाईलाई सकरात्मक रहन मद्दत गर्न
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ नियमित रूपमा दिमागको मार्ग खुला राख्न र तपाइँको मेमोरी तीव्र राख्न तपाइँको मस्तिष्कको व्यायाम गर्नुहुन्छ। न्यूरल मार्ग तपाईको दिमागका अ are्ग हुन् जुन तपाईलाई सूचना सम्झन, समस्या समाधान गर्न र कार्यहरू सम्पादन गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईले विगतमा अनुभव गर्नु भएको थियो।
जब तपाईं आफ्नो मस्तिष्क व्यायाम, तपाईं पथ उत्तेजित हुनुहुन्छ ताकि तिनीहरू महत्त्वपूर्ण र सक्रिय रहनेछन्। तपाईको दिमागले चाहिने व्यायामहरू पूरा गर्न तपाईले आफ्नो दिनचर्या एकपटक परिवर्तन गर्नुपर्दछ र नयाँ सीपहरू सिक्नु र विकास गर्नु पर्छ।
Mnemonic उपकरणहरू मस्तिष्कलाई उत्तेजित र सक्रिय राख्न केहि उत्तम तरिकाहरू हुन्।
यहाँ तपाईको दिमागका लागि सब भन्दा राम्रो मेमोनिक अभ्यासहरू छन्:
एक्रोस्ट्रिक्स - एक्रोस्ट्रिक्सले एउटा वाक्य बनाउँदछ जहाँ प्रत्येक शब्दको पहिलो वा अन्तिम अक्षरले सम्झन चाहेको आईटमलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। एक लोकप्रिय एक्रोस्टिक भनेको "E, G, B, D, F" हो - "हरेक राम्रो केटाले राम्रो गर्दछ", संगीतमा ट्रेबल क्लिफको लाइनहरू सम्झनका लागि।
दृश्य - जस्तै तपाईको दिमागको साथ तस्वीर लिनु। तिनीहरूलाई र colorful्ग सजिलो बनाउन रंगीन र त्रिमितीय बनाउनुहोस्। उदाहरणको लागि, पहिलो अणु बम विस्फोट भएको बेला को अध्यक्ष थियो भनेर सम्झनको लागि, तपाईले ह्यारी ट्रुम्यानलाई विशाल मशरूम क्लाउडको अगाडि चित्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
Chunking - यो विधि संख्याहरूको लामो स्ट्रिंग तोड्नका लागि उत्कृष्ट हो जुन सजिलै याद राखिन्छ। उदाहरणको लागि, टेलिफोन नम्बरहरू ड्राइभरको इजाजतपत्र नम्बर भन्दा राम्रोसँग सम्झन सकिन्छ किनकि ती तीन भागमा विभाजित छन्।
परिवर्णी शब्द - यी शब्दहरू हुन् जुन तपाईले सम्झन चाहानु हुने वस्तुहरूको पहिलो अक्षर लिएर ती नयाँ शब्द बनाएर गठन गरियो। उदाहरणको लागि, "लन्ड्री डिटर्जेंट, जैतुन, डायपर र अण्डाहरू" समावेश भएको किराना सूचीलाई सम्झनको लागि, तपाइँ "LODE" भन्ने शब्द बनाउनुहुन्छ।
राइम्स - स्कूलको दिनबाट तपाईंलाई याद हुने कविताहरू प्रयोग गर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई आफैं बनाउनुहोस्। तपाईले त्यो कविता याद गर्नुभएको होला, "कोलम्बसले चौध सय, बानानौंमा समुद्रको नीलो समुद्री यात्रा गरे" अन्वेषकले न्यु वर्ल्डको लागि आफ्नो भाग्यशाली यात्रा सुरु गरेको समयलाई सम्झन।
माथिका सबै विधिहरू तपाईंको मस्तिष्कलाई आकारमा राख्ने र स्मृति समस्याहरू जस्तै डिमेन्शिया र अल्जाइमर रोग.
यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि तपाई जति धेरै मस्तिष्कको बाहिर काम गर्नुहुन्छ, तपाई त्यति नै प्रकृया गर्न र जानकारी रिकल गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
आफैलाई फरक तरीकाले चुनौती दिनुहोस्। नयाँ कौशल, भाषा वा खेल सिक्नुहोस्। र, कुनै व्यायाम जसको लागि तपाईंले आफ्नो हातहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ तपाईंको दिमाग पनि व्यायाम गर्न सक्छ।
तपाईंको मस्तिष्कको हात-आँखा समन्वय क्षेत्र मा काम गर्न एक वाद्य वा उपकरण को गतिविधि को कुछ प्रकार लिनुहोस्।
सबै भन्दा धेरै - दिमाग नभई दिमागमा बस्नुहोस्। पलंगबाट तल झर्नुहोस् र केहि नयाँ प्रयास गर्नुहोस्।
तपाईको मस्तिष्क स्वास्थ्यका लागि उत्तम भिटामिन र पोषक तत्व
मस्तिष्क फिट राख्न अन्तिममा तपाइँको शरीर को लागी उस्तै दिमाग दिनुहुन्छ। यदि तपाईं एक कमी छ भने, यसले ध्यान र स्पष्टता, मूड स्विंग्स, मानसिक गिरावट, डिप्रेसन र चिन्ता, डिमेन्शिया र मेमोरी रिकल सहित विभिन्न तरिकामा तपाईंको मस्तिष्कलाई असर गर्न सक्छ।
त्यहाँ धेरै "पूरकहरू" बजारमा छन् जुन विशेष गरी दिमागको लागि हुन प्रोत्साहित गरिएको छ, तर तपाइँले थाहा पाउनु पर्छ वास्तवमै कुन काम गर्दछ।
तल तीन आवश्यक भिटामिन र पोषकहरू छन् जुन स्वस्थ दिमागको लागि बिल्कुल आवश्यक छ:
ओमेगा-3फैटी एसिड - डोकोसाहेक्साईनिक एसिड (DHA) ओमेगा fat फ्याट्टी एसिडमा फेला पर्‍यो। डीएचए मस्तिष्कको मुख्य भवन ब्लक हो र यस बिना मस्तिष्क समस्याहरू जस्तै स्नायु प्रणालीसँग जोडेको छ र मानसिक विकार देखा पर्न सक्छ।
डीएचए को कमी ले मुड स्विंग्स, डिप्रेसन र चिन्तालाई पनि असर गर्न सक्छ, डिमेंशिया, अल्जाइमर रोग र मेमोरी नोक्सान। यी सर्तहरूका लक्षणहरू मध्ये धेरै ओमेगा fat फ्याटी एसिड सप्लीमेन्टहरूको साथ मद्दत गर्न सकिन्छ।
अध्ययनले देखाएको छ कि डीएचएको उच्च स्तर भएका बुढा व्यक्तिहरू डिमेन्शिया र अल्जाइमरबाट पीडित हुने सम्भावना %०% कम हुन्छ र तल्लो तहकोसँग।
भिटामिन B12 - यदि तपाई आफैंलाई जानकारी सम्झन गाह्रो भइरहेको छ र महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाई प्रायः धेरै समय कुहिरोमा हुनुहुन्छ भने तपाई बी-जटिल भिटामिनको कमी हुन सक्नुहुन्छ।
अध्ययनले देखाउँदछ कि भिटामिन बी १२ को कमी र बुढापाकाका सब भन्दा डरलाग्दो अवस्था - डिमेन्शिया र अल्जाइमर रोग बीच एक सम्बन्ध छ।
किनकि मानिसहरूलाई उमेरको रूपमा भिटामिन बी १२ सोख्न गाह्रो हुन सक्छ, भिटामिन पूरक क्रममा हुन सक्छ। निश्चित हुनुहोस् र तपाईंको बर्षीय भिटामिन जाँच गर्नुहोस् तपाईंको वार्षिक चेकअपको बखत।
भिटामिन डी - यो भिटामिन डीएचएको नजिक छ मस्तिष्कको स्वास्थ्य र मेमोरी रिकलको महत्त्वमा। भिटामिन डी डिप्रेशन र चिन्ताबाट छुटकारा पाउन सक्छ, ध्यान केन्द्रित गर्न र समस्याहरू समाधान गर्न राम्रो सक्षम हुन मद्दत गर्दछ।
तपाईंको स्मृतिमा गहिरो प्रभाव पार्नुको साथ, भिटामिन डीले मधुमेह, हृदय रोग र क्यान्सर जस्ता रोगहरूदेखि पनि बचाउन सक्छ।
तपाईको हड्डी घनत्व पनि यस भिटामिनको अभावबाट प्रभावित हुन सक्छ र अस्टियोपोरोसिस रोक्न सक्छ, जो हिप भंगको एक प्रमुख कारण हो।
मस्तिष्क स्वास्थ्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण अन्य विटामिनहरूमा एन्टिऑक्सिडन्टहरू समावेश छन् जसले तपाईंको शरीरलाई निःशुल्क रेडिकलहरूबाट मुक्त गर्दछ जसले मस्तिष्कको न्युरोल मार्गहरूलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ।
"स्मार्ट ड्रग्स" लोकप्रिय ब्रेन बूस्टरहरू भएका छन् र सदस्यताबाट मात्र उपलब्ध छन्, तर तपाईंले यस मार्गमा जान निर्णय गर्नु अघि आफ्नो चिकित्सकसँग कुरा गर्नु पर्छ।
तपाईं आफ्नो मस्तिष्क शक्ति र मेमोरी रिकल बढाउन सक्नुहुन्छ यो सुनिश्चित गरेर कि तपाईंको शरीर उचित पाइरहेको छ प्राकृतिक पोषक तत्व र भिटामिन। यदि होईन भने, सप्लीमेन्टले फरक पार्न सक्दछ।
तपाईंको मस्तिष्कलाई सकारात्मक राख्ने र कार्यान्वयन गर्ने अर्को सरल तर शक्तिशाली तरीका पढ्नु हो! पढाइले दिमागलाई काम गर्दछ।
तपाईले फिक्शन वा जीवनी छनौट गर्नुभएन। यस लेखलाई पढ्नु भएको तथ्यले तपाईंलाई रुचि भएको सुझाव दिन्छ व्यक्तिगत विकास र आत्म सुधार।
हामीले केही उत्कृष्ट प्रदान गरेका छौं तपाईलाई डाउनलोड गर्न को लागी नि: शुल्क व्यक्तिगत विकास पुस्तकहरु। तपाईं केहि पाउन सक्नुहुन्छ महान व्यक्तिगत विकास उद्धरण र भनाइहरू यसले तपाईंको जीवनको यात्रामा प्रेरित गर्दछ।
पछिल्लो२ तपाईंको ब्रोथ माइन्डसेटलाई आत्म-अनुशासनमा प्रभाव पार्ने तरिकाहरू
अर्कोजीवन कोचिंग सल्लाहहरू - सफलताको लागि आफूलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्
नमूना व्यक्तिगत विकास योजना
तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्न व्यक्तिगत विकास श्रोतहरू
फेब्रुअरी 16, 2017
तपाईंको जीवनलाई 30 दिन ईबुकमा परिवर्तन गर्नुहोस्
अक्टोबर 26, 2018
एक SWOT विश्लेषण तपाईंको व्यक्तिगत विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ
जब यो स्पष्ट हुन्छ कि लक्ष्यहरू पुग्न सक्दैन, लक्ष्यहरू समायोजन नगर्नुहोस्, कार्य चरणहरू समायोजित गर्नुहोस्।